Fahazarana manjakazaka ara-politika :: Lohalaharana amin’ny fidongian- toerana hatrany Ravalomanana Marc • AoRaha
Fahazarana manjakazaka ara-politika Lohalaharana amin’ny fidongian- toerana hatrany Ravalomanana Marc
Kirin’antitra. Rehefa tsy nahomby tamin’ny fifidianana filoham-pirenena dia misisika mafy hiverina ho ben’ny tanàna eto an-drenivohitra indray ny Filoha teo aloha, Ravalomanana Marc. Nanamafy ny firotsahany eto an-drenivohitra ny sasany tamin’ireo mpiara-dia aminy ao anatin’ny antoko Tim.
Re fa tsy nilefitra fa niziriziry hatrany tamin’ny kiriny handray anjara amin’io fifidianana io izy, rehefa nandamòka ny tetika nikatsahany ny toeran’ny lehiben’ny fanoherana eto Madagasikara.
Araka izany, tsy mihevitra ny hanome sehatra an’ireo tanora sy zandry mpisehatra ara-politika izay mpanara-dia azy mihitsy ny lehilahy. Mibahana loatra ao aminy ny fitiavana fandrombahana fahefana.
Isan’ireo manosika azy ireo vondrona mpanao politika madinika sy efa lefy laza ao anatin’ilay fikambanana Rodoben’ny mpanohitra eto Madagasikara. Fanohanana feno fitaka rahateo satria tsy hitondra fampandrosoana ho an’Antananarivo renivohitra velively.
Mazava ny tenin’izy ireo tetsy Bel’air, tamin’ny alatsinainy teo, fa fanoherana ny fitondrana no tena tanjona. Tsy azo adinoina ihany koa fa Ravalomanana Marc ihany no toy ny Ben’ny tanàna teto tao anatin’ny dimy taona izao, na dia ny vadiny aza no lany tamin’ny fifidianana. Milaza miara-mahita ny fahapotehan’Antananarivo renivohitra isika ankehitriny.
Ho teha-maina mandrivorivo ho azy ary hamotika tanteraka ny ho avin’ny antoko Tim ny tsy fahalanian-dRavalomanana Marc ho Ben’ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Efa-taona izay no nitantanan’ny vadin’ity Filoha teo aloha ity ny tanànan’Iarivo. Samy nahatsapa ny voka-dratsy naterak’izany raharahan’ny fianakaviana Ravalomanana izany ny sasany tamin’ireo mpanolotsainan’ny kaominina.
“Tsy nisy mihitsy ny tatitra nataon’ny Ben’ny tanàna mikasika ny zava-bita sy ny fandaniam-bolan’ny kaominina. Ampy izay ny fanaovana takalon’aina ny tanànan’Antananarivo”, hoy Ravololomanana Lalatiana, isan’ireo mpanolotsaina tao amin’ny kaominina Antananarivo renivohitra ary kandidà hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna.
Loza mitatao eny amin’ny faritra avo :: Tandindonin’ny fihotsahan’ny tany indray Manjakamiadana sy ny manodidina
Tarehimarika avy amin’ny CENI :: Mbola kandidà valo amby dimampolo sy telonjato no nirotsaka manerana ny Nosy